Ciidamo farabadan oo Maanta lagu daadiyay wadooyinka magaalada Beled-Xaawo (Sawiro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidamo farabadan oo Maanta lagu daadiyay wadooyinka magaalada Beled-Xaawo (Sawiro)
Ciidamo farabadan oo Maanta lagu daadiyay wadooyinka magaalada Beled-Xaawo (Sawiro)
Ciidamada oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay geysay Gobolka Gedo oo ah Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee haramcad ayaa waxaa ay howlgallo ka wadaan Xaafadaha iyo wadooyinka degmada Beled-Xaawo.
Saraakiisha Ciidamada iyo Maamulka degmada ayaa waxaa ay sheegeen in howlgallada ay yihiin kuwo lagu sugayo Amniga degmada Beled-Xaawo oo ay horay ugu dagaalameen Ciidamada Dowladda & kuwa daacadda u ah Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Janan oo baxsad ka ah dowladda Soomaaliya.
Dadka ku nool degmada Beled-Xaawo ayaa waxaa ay Risaala u sheegeen in Ciidamada Haramcad oo wata Gaadiidka dagaalka lagu arkayo wadooyinka iyo duleedka degmada Beled-Xaawo, kuwaas oo wada howlgallo baaritaano ah.
Laamaha amniga degmada Beled-Xaawo weli sooma bandhigin dad loo qabtay fallaka amni darro ee dhawaan ka dhacay degmadaasi,iyada oo xaalada ay haatan tahay mid degan.
Dhanka kale Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha Jubbaland (Maxamud Sayid Aadan) ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay amni darada ka jirta gobolka Gedo.
Ciidamo farabadan oo Maanta lagu daadiyay wadooyinka magaalada Beled-Xaawo (Sawiro) was last modified: August 19th, 2020 by Admin